သက်ရောက်မှုတစ်ခု၏ အက်ကြောင်းကြား၌…။ | PoemsCorner
ဂီတတစ်ပုဒ်ရဲ့ကြားမှာ ပျှော်ရွှင်စွာ အိမ်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်…….။
လက်တံမဲ့နာရီရဲ့ အချိန်ပြဆိုမှု မမှန်ခြင်းဒဏ်ကို
မြတ်နိုးစွာနဲ့ပဲ ရင်နှစ်ခုမှာလက်ခံရင်း ,,,,,,,,,,
ဘ၀ထဲလမ်းလျှောက်ထွက်၍ အရိပ်မရသောအခါများတွင် ကျွန်တော်မနက်ဖြန်များစွာနှင့် စကားပြောကြည့်ဖူးပါသည်..။ ထိုသို့ ကျွန်တော်ကြိမ်ဖန်များစွာ စကားပြောမိတ်ဆက်စကားဆိုနေလည်း….. သူတို့သည် စိုးစဉ်းမျှသောအပြုံးနှင့် ကျွန်တော့်ကိုစကားပြန်ဆိုခြင်း အမှုကို မပြုကြပါ…။
ထို့ကြောင့် ကြိုးပြတ်သောကြယ်တချို့ကို မြင်ရသော ညအခါတွင်….. တဖန်ပြောင်း၍ ကြယ်များကို စကားဆိုကြည့်လိုက်ပါသည်..။
ကျွန်တော့်၏ ပြောင်းလဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မိတ်ဖွဲ့မှုသည် မှန်ကန်ကြောင်း မြေပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသော ကြယ်များ၏ စကားပြန်ဆိုသံ က သက်သေခံနေပါသည်…။
ထိုသို့ ကြိုးပြတ်ကြယ်တချို့နှင့် အတန်အသင့်မိတ်ဆွေဖြစ်၍ ကာလအတန်ကြာပြီးနောက်……. တစ်ညတွင် သူတို့နှင့်ကျွန်တော် စကားတစ်ခွန်းကို အစပြုပြီး….. “နယူတန်…ပန်းသီးတစ်လုံးနှင့် လုပ်စားသွားသော ” ကမ္ဘာမြေပြင်ဆွဲငင်အားရှိခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ မတိုး မကျယ် အချင်းများကြပါလေတော့သည်…။
ကမ္ဘာမြေပြင်ကြီး၏ ဆွဲငင်အားအစသည် စကြာဝဋ္ဌာထဲ၌ရှိသော သူတို့ကိုတောင် ကြွေကျလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းကို သူတို့ က လက်မခံကြပါ…။ ကျွန်တော့်ကို သူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုကြည့်သလို ပြူးကြောင်ကြောင်တအံ့တသြစကားများကို သယ်ဆောင်သော မျက်လုံးစိမ်းများနှင့် ကြည့်ကြပါသည်…။
နောက်ဆုံးတော့ သူတိုသည် ကျွန်တော့်အား သနားစရာသတ္တ၀ါတစ်ကောင်၏ မစင်အားမြင်၍ အလွန်အော့နှလုံးနာသွားသော အမူအရာများဖြင့် ကမ္ဘာမြေပြင်ကြီး၏ အတွင်းကျကျအနက်ရှိုင်းဆုံး တစ်နေရာသို့ တိုးဝင်သွားပါလေတော့သည်..။(ကျွန်တော့်အထင် ကမ္ဘာမြေပြင်ဆွဲငင်အားကြောင့်သာ သူတို့ထိုလိုဖြစ်သွားခြင်းအပေါ် သူတို့ဖုံးကွယ်လိမ်ယှက်လို၍ သူတို့စိတ်ဆန္ဒအရ တိုးဝင်သွားသည် ဟု ပြောခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်…။)
ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်လည်း ဟိုယခင်လိုပြန်လည်ကာ ဘ၀၏အရိပ်ကို ပြန်ရှာရလေပြန်ပါသည်…။ ရှာသာရှာနေရပါသည် မတွေ့မည်ကိုတော့ ကျွန်တော် အပ်ချမတ်ချ ယုံကြည်လို့လဲ ထားပါသည်..။ ထင်သည့်အတိုင်းပင်…ကျွန်တော် နှစ်ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ခုအဆုံးတိုင် ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ..။ ထိုကာလများသည် ကျွန်တော့်ဘ၀၏ အမှတ်ရဖွယ် ငြီးငွေ့စရာအကောင်းဆုံး နေ့ရက်အကျိုးအပဲ့များ အဖြစ် ကျွန်တော့်မှတ်ညဏ်တချို့ထဲတွင် တင်ကျန်ရစ်ခဲ့စေပါသည်…။
အပြီးသတ်တော့ ….. အရာအားလုံးကို ကျွန်တော်မလိုချင်တော့ယောင်ဆောင်၍ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး ကောင်းကင်ကိုသာမော့လို့ ကြည့်နေခဲ့မိပါတော့သည်…။ အချိန်တို့သည်လည်း တရွေ့ရွေ့နှင့် ညာရစ်အတိုင်းလှည့်၍ နေ့ရက်ပြကိန်းဂဏ္ဍန်းများသည် ကျွန်တော့် ၏ လက်ပါတ်နာရီအတွင်း ဘယ်ဘက်လှဲ့၍ ပြောင်းလဲသွားပါသည်…။
ထိုကဲ့သို့နေလာခဲ့ရင်း လနဲ့နေ တစ်ပြိုင်နက်တည်းထွက်သောနေ့ဟု ထင်သောနေ့တွင်……… လမျက်နှာပေါ်ခင်းထားသော လမ်းတစ်ခု၏အစ၌ သူမကို ကျွန်တော် စကားပြောဖော်အဖြစ်ရရှိခဲ့ပါသည်…။
သူမသည် ပန်းတစ်ပွင့်လို လှ၍…. ဖန်ကွဲတစ်ခုလို သူမ မာနက ထက်မြပါသည် ။ သို့သော် သူမသည် ကျွန်တော့်အား သူမ၏မူတချို့ နှင့် သိသာအောင်ဆန့်ကျင်ကာ သူ့၏ ရီဝေေ၀မျက်လုံးလေးများနှင့် နူးညံ့တတ်ပါသည်…။ ထို့ကြောင့် သူမနှင့် အချိန်တော်တော် များ များ တွင် အလွန်စပ်မယ်မှန်းသိသော်လည်း….. မုန့်တီပန်းကန်ထဲ ငရုတ်သီးများမှိတ်ကြိတ်ထဲ့၍ လမ်းဘေးဆိုင်လေးတစ်ခု၏ ချောင်လေး ထဲတွင် အတူရယ်မောပြီး စပ်ခဲ့ကြပါသည်…။
ကတ္တရာလမ်းမကြီးကို ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဆေးအဖြူသုတ်
တေးဆိုတဲ့ ကြယ်တွေရှိမယ် ထင်ပေမယ့်……..
ပြိုဆင်းလာတဲ့ တိမ်မဲတွေရဲ့ အန်ဖတ်တွေဟာ….
သူမကို ကျွန်တော်အရမ်းချစ်ပါသည်…။ သူမလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ အရမ်းချစ်တတ်ပါလိမ့်မည်….။
သည်လိုနှင့် ကျွန်တော်နှင့်သူမ နှစ်ဦးသဘောတူ လပ်ထပ်ကြပါတော့သည်…။ လပ်မထပ်ခင် ခိုးပြေးသည်ဟုပြောရလျှင်.”ဆိုကရေးတီး” ၏ သီအိုရီကို ပို၍ထောက်ခံရာရောက်နိုင်ပါသည်…။ အမှန်ကိုသာပြောဟု ဆိုလျှင်….. ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးညသန်းခေါင်တွင် နှစ်ဖက်မိဘများ သဘောတူနေသည့်ကြားမှ စွန့်စားလိုသောစိတ်နှင့် လူချေတိတ်သောလမ်းများပေါ်က ခွေးအူသံများကို ကမ္ဘာကျော်ဂီတတစ်ခုလို နား ဆင်ပြီး …… ညတစ်ည၏ မိန်းမောမှုအောက်တွင် အတူအိပ်စက်ခဲ့ကြပါသည်….။
ထိုညတွင် ပန်းတစ်ပွင့်သည် လှပစွာ ပွင့်ဝဲလွင့်ကြွေကျလာပုံမှာ လှပသောကဗျာတစ်ပုဒ်၏ နိမိတ်ပုံပြများနှင့် တူညီခဲ့ပါသည်..။သူမ သည် ရှက်ပြုံးတချို့နှင့်ငြင်းပယ်ခဲ့သေးသည်…။ သို့သော် လမင်းသည် နေမင်းမဟုတ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး၏ ချစ်ခြင်းဖွဲ့ သံစဉ်များသည် စမ်းချောင်းတစ်ခု၏ အထက်တွင် လွင့်မျောကာ အဆုံးမဲ့ ပါသွားလေတော့၏…။
ချစ်သူရေ အဲဒီ့ညက ……
ငါ့နှလုံးသားအပေါ်ကို ရီဝေစွာ ကျဲဖြန့်ခဲ့ပြန်တယ်…..။
သူမနှင့်ကျွန်တော် ရက်ပေါင်း ၃၆၅၀ မပြည့်တတ်သေးခင်ကာလတွင် နေဆယ်စင်းထွန်းလင်းသောညများ၌ မျက်ရည်များစို့နင့် စွာနှင့် လမ်းခွဲဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ကြရပါသည်….။ ကန့်သတ်ထားသော နေရာတစ်ခုတွင်….တစ်ဦးကို တစ်ဦးကျောခိုင်းကာ ပွေ့ဖက်ထားကြပါ၏.။ သူမသည် အပြုံးမဲ့သော ရယ်သံတချို့နှင့် ကျွန်တော့်အား သူ့ရင်ခွင်နှင့်ဝေးရာသို့ တွန်းလွှတ်၏…။ ရိုက်မောင်းပုတ်မောင်းပြု၏…။
ကျွန်တော် ပေကပ်ကာ ထွက်မသွားချင်ခဲ့ပါ…။ သူမသည် ကျွန်တော်ဘ၀ဖြစ်သလို….. ကျွန်တော်သည်လည်း သူမဘ၀ ဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့်ပင်ထင်ပါသည်… ကံတရားသည် သူမနှင့်ကျွန်တော့်အား အလွန်ကွာဝေးသော တံတိုင်းတစ်ဖက်ခြားဆီပို့ကာ ကန့်သတ် လိုက်ပါတော့သည်…။
ထိုအချိန်တွင်….. အနောက်အရပ်မှ ကျီးတို့ပြို၏။ ရင်နှစ်ခုထဲတွင် တော်လဲသံပေါင်းများစွာ မြည်ဟည်း၏..။ မြတ်နိုးမှုများစွာ ပျက်သုန်း ၏..။ နှုတ်ဆက်ခြင်းတို့ အကြာတည်ကြလေ၏..။
နှလုံးခုန်သံတွေရဲ့ စည်းချက်ဖြုတ်ထားတဲ့ အသက် မဲ့ဂီတသံကို…
ငါ.. မက်မောစွာ ချစ်တတ်နေမှာ သေချာပါတယ် ချစ်သူ……။
သည်နောက်တော့ ကျွန်တော် ယခင်လိုဘ၀မျိုး ပြန်ရောက်၍ အရိပ်မဲ့လမ်းတွင် သူမထားခဲ့သော သက်ရှိလေး(၂)ဦး၏ လက်ကိုဆွဲကာ အချိန်များကို မမောတမ်းဖြတ်သန်းရပါလေတော့သည်..။ ကျွန်တော်သည်လည်း “သက်ရောက်မှုတစ်ခု၏ အက်ကြောင်းကြား၌ ” နောက်ထပ် စကားပြောဖော် ရှာဖြစ်တော့မည် မထင်တော့ပါ….။
ကကြီး။(28.3.2012)(00း00am) [email protected]
In: ဝတ္ထု Posted By: kyagee13 Date: May 9, 2012
သိုးမည်း – အက်ကြောင်း
ကျေနပ်ခြင်းရဲ့ ဘဝ တစ်ခု…….
ကျေးဇူးဆိုတဲ့ နွံ့တစ်ခု -နရီထက်
Leave comment No comment & 372 views